Sengivele ngiyibonile i-movie ye-4 emnandi | Izincwadi Zamanje
Sengivele ngiyibonile i-movie ye-4 emnandi
Hhayi bo bakwethu, lokho okunikiwe kuphelile namaholidi ami esephelile, sengibuyile sengizama ukubuyela esigqini (ngoMsombuluko ngibuyela emsebenzini kanye nokudangala kwangemva kweholide).
Leli holide ngiye kobona ingxenye yesibili ye-movie ye- 4 kumnandi. Nakhu ukubuyekeza kwami ​​uma kwenzeka noma ngubani ethanda ukuphawula ngakho nathi. I-movie ingcono kunengxenye yokuqala (engeyona enzima kakhulu, ngoba namanje ayiyimbi, ibinamaphuzu amaningi okufanele ithuthukiswe), kepha akumangazi futhi. Kuyi-movie ejabulisayo yalezi zasehlobo kanye nama-popcorn. Mhlawumbe kuhloswe ngezethameli ezingane futhi ezingathambeka kalula (abashana bami bayayithanda), kepha umuntu usevele unenkani futhi ufuna kakhulu. Kepha akuyona i-movie enhle kunazo zonke abangayenza yamaqhawe ajwayelekile kakhulu kwi-Marvel Universe.
Ngizokutshela ukuthi yini ebengiyithanda kakhulu nengikuthandayo kakhulu, ngaphandle kokungena ngephuzu lefilimu ngephuzu.
- Silver Surfer (ISilver Stela), imiphumela emihle ekhethekile esetshenziselwe ukuyenza iphile, kuyamangaza ukuthi bekulokhu kanjani, kuhamba kanjani nokuthi kuhlangana kanjani nabalingiswa benyama negazi (kwagcwala amakhosi akwaWeta, wona lawa enza imiphumela ekhethekile yeNkosi yamasongo)
- Isikhathi lapho u-Estela Silverada akhuluma khona noSue futhi emtshela ngokufika kukaGalactus, nezwi lamaCastilian dubbing akhethwe kahle kakhulu, angazi ukuthi iFishburne izwakala kanjani koqobo.
- Iso likaJohny Storm liba yi I-Super skrullNjengoba bengazange bayikhiphe le movie, ngithande indlela uJohnny aphenduka ngayo umbono mbumbulu iSuper Skrull ngamandla ahlanganisiwe ama-4 ekugcineni kwe-movie.
- Uhlelo lokufa lokuthola amandla e-cosmic, njengakwiMpi Yezimfihlo ayenza noGalactus futhi kamuva noSomandla.
- Imizuzu embalwa (ayihlali isikhathi eside) lapho iDoctor Doom ikuyo UDOKOTELA WOKUFA, selokhu ebuyile empilweni futhi esusa isifihla-buso sakhe, abonakala ngaso ekhubazekile esihlalweni sakhe sobukhosi saseLatverian, aze abanikeze ukuphulukisa amanxeba akhe ukuthi umdlali odlalayo osemsebenzini uphuma futhi (ngicabanga ukuthi bonke ngoba bafuna abonwe iGepetto umlingisi), ngakho-ke injabulo ihlala kwizigcawu ezimbalwa ku-movie.
- Isibani somuntu, sikhulu ngazo zonke izindlela.
- Imiphumela ekhethekile kaMnu Fantastic ngeshwa, ikakhulukazi endaweni yedisco, bekufanele basebenzise isabelomali sonke ku-Estela silverada, ngoba uma kungenjalo ...
- Ukuthi iGalactus ku-movie iyizinduku, kufanelekile ukukhipha i-giant, kodwa okungenani ichaza ukuthi iya emkhunjini, ekugcineni (futhi bathi cha) kuphuma ibhola lentuthu kuphela (lapho kufakwa okuthile okuvela emkhunjini, uma wazi).
- Doctor Doom (ngaphandle kwezigcawu ezimbalwa engizishilo ngaphambili) AKUSIYO LOKHO !! Ukufa kungumbusi waseLatveria, ngezikhali zakhe nomlingo wakhe omnyama, yini le ayenzayo esiza ibutho lase-US njenge-ye-ye enhle, hahaha-ngimbi-kodwa-ngiyaxolisa?
- Sue Storm, angazi noma ngabe yizwi lokuthwebula yini, noma yini enginikeza ukuthi u-Alba uyazi kuphela ukubeka ubuso obuncane (qaphela, uyi-güena, kepha umubi njengomlingisi futhi uyisikhathi esihle)
- Into ikwi-movie ngoba kufanele ibe yine?
- Kubukeka kufana nohlelo lwesiteshi ukuhamba neFantastic 4, bavakashela umhlaba behamba umuzi nomuzi behlelekile, singamaYankees kepha siyazi ukuthi liphi ihlathi elimnyama laseJalimane.
- Ngamafuphi, umuzwa wokuthi ushiye ukuthi bekungaba ngcono kakhulu, kepha asethembe ukuthi wenza ibhokisi lezinto nokuthi okwesithathu intelezi izohamba, ngohambo oluya eZegative Zone, ukuqala ifilimu noMole Mole kanye noDkt Death njengoba uNkulunkulu wayehlose.
Kukhona okungiphunyukayo, uma ufuna ukungikhumbuza, beka amazwana ngokukhululeka. Siyethemba ukuthi ukuzivumelanisa nencwadi yamahlaya okulandelayo kungconywana.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Amahlaya » Sengivele ngiyibonile i-movie ye-4 emnandi
Ngabe lokhu okushiwo ukwenza uMole Man ukuthi bazoqasha uFernando Esteso kuyiqiniso?
UConner Kent kusho
Ngiyithandile i-movie, ngijwayele kakhulu, yebo, kodwa yinhle impela. Ngivumelana ngokuphelele nawe ngezahlulelo, ikakhulukazi lezo zikaReed Richards, ngiyaxolisa. Vele, ukwehluleka okubi kunakho konke kwakuyi-Alba, eyayimbi !! bebengeke yini bakudayise kangcono? noma ubeke esinye isitayela sezinwele? by SGIYA ngoMASKANDI MEDIA
Phendula uConner Kent
Ngempela uConner, uma bengiyithanda ngaphezu kweyokuqala, benginomuzwa nje wokuthi bekungaba yini. Iminwe iwele ne-Iron Man's ukubona ukuthi yini ephuma.
Ngingafaka "into embi nge-movie" osindayo "uStan Lee" okufanele njalo aphume (enze "i-gili") kumabhayisikobho e-Marvel kube sengathi yisigatshana esiphoqelekile esivumelwaneni ... yena, yena , yena!!
Sawubona! Angibonanga owokuqala. kokungena kwe-1F kuphela ukwakheka kwezinhlamvu. Ngabona ama-4 ngoba i-surfer yesiliva ibonakale inhle kakhulu kuzikhindi futhi yebo, okuhamba phambili kwefilimu. Ngamafuphi, isitolimende sezentengiselwano nezingane lapho okuwukuphela kwento enamathiselwe kumakhomikhi kusengusilverurfer kanye nesimo sengqondo sikaJonny Storm sokuzimela. Amanye amaphutha ekwethembekeni kwe-animation. UDkt Doom (umlingisi uJulian McMahon wayesesendimeni yakhe njengoCristian Troy kusuka ku-nip / tuk. Ngandlela-thile, uGalactus, uthanda ukuthi uzenza omunye umugqa engangicabanga ukuthi muhle, ngicabanga ukuthi kuhlekise ukubona umdondoshiya ogqoke isudi onsomi ehamba ngomkhumbi-mkhathi. Izinto eziningi kufanele zivuselelwe futhi zivumelane nesikrini esikhulu futhi ngicabanga ukuthi kube yisinqumo esihlakaniphile nesinokuhlakanipha. Sanibonani esivela eMexico.
Kungaba yisinqumo esihlakaniphile iGibs, kodwa okungathetheleleki ukuthi uTim Story, umqondisi, uxolise, lowo ovela kumakhredithi njengomqondisi, ubephakamise inkohliso yokuthi uGalactus uzovela kwifilimu. Sanibonani futhi ngiyabonga kakhulu ngokusilandela sisuka eMexico.
Iqiniso ngukuthi angikaze ngiwathanda amahlaya we-4 omnandi futhi lapho ngibona ifilimu angizisoli ngoba ifilimu isantula izinto eziningi okufanele ithuthukiswe.
Ngikuthola ulungile kukho konke okushoyo futhi into ebi kakhulu ukuthi i-galactus ayibonwa futhi ekugcineni ayisho nokuthi kwenzekani phakathi kokushayisana kwe-surfer yesiliva ne-galactus kepha kumuntu ongazi ngamahlaya lapho Ukubona i-movie kunikeza isithombe sokuthi bobabili bafa okuyinto empeleni engekho.
I-Rumore Rumore (V)